» नकाउटमा टिम प्रमोदबाट को हुनेछन् उत्कृष्ट ३ प्रतियोगीहरु ?
नकाउटमा टिम प्रमोदबाट को हुनेछन् उत्कृष्ट ३ प्रतियोगीहरु ?
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०७:४४
मकवानपुर, २० जेठ । चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भोईस अफ नेपाल सिजन ३’ को नकाउट राउण्डमा अन्य कोचहरुसँग जस्तै कोच प्रमोदको टिममा पनि ९ जना प्रतियोगीहरु छन् । अब टिम प्रमोदका ९ जना प्रतियोगीहरु नकाउट राउण्डमा ३–३ जनाको समूहमा आफ्नै टिमका प्रतियोगीहरुसँग भिड्नेछन् । आफ्नै टिमका प्रतियोगीसँग भिडेर जित हासिल गरेका ३ जना प्रतियोगी मात्र लाईभ राउण्डमा प्रवेश गर्नेछन् भने ६ जना बाहिरिने छन् । कोच प्रमोदको टिममा परेका सबै प्रतियोगीहरुलाई निक्कै नै चुनौति छ । किनभने ९ जना प्रतियोगीहरु सबै निक्कै बलिया प्रतियोगीहरु छन् । कोच प्रमोदको टिमबाट उत्सव नेपाल, धर्मेन्द्र सुनार, दिक्षा थापा, किरण गजमेर, सुदिता राई, निहारिका ज्ञवाली, मेलिना मैनाली, रवि गहतराज र बिक्की परियारले नकाउटमा भिड्नेछन् । यस भिडियो सामग्रीमा कोच प्रमोदको टिमबाट नकाउट जित्दै लाईभमा जानसक्ने प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । तपाईको विचारमा यी प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगीहरु नकाउट जित्दै लाईभमा जालान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । द भोईस अफ नेपाल सिजन ३ को अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
कोच प्रमोदको टिममा ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल ५ जना प्रतियोगीहरु छन् । उत्सव नेपाल, धर्मेन्द्र सुनार, दिक्षा थापा, किरण गजमेर र सुदिता राईले ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काएका थिए । यी प्रतियोगीहरु सबै धुरन्धर भएकोले कोच प्रमोदलाई नकाउट राउण्डमा निक्कै पिडा हुने अवस्था छ । सम्भत कोच प्रमोदको टिमबाट यीनै मध्ये कुनै प्रतियोगीहरु फाईनलमा पुग्नेछन् तर अन्य ४ जना प्रतियोगीहरुलाई पनि कमजोर मान्न भने हुँदैन किनभने उनीहरुले पनि ब्याटलमा तहल्का मच्चाएर फाईनलमा पुग्ने दाबेदारका रुपमा आफुलाई परिचित गराएका छन् । पाल्पाका ३१ वर्षीय उत्सव नेपाल सानैदेखि सँगीतमा खारिएका गायक हुन् । उनलाई नकाउटबाट लाईभमा पुग्नबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले पनि उनी लाईभका लागि बलिया दाबेदार हुन् । सिजन ३ कै सर्वाधिक चर्चित प्रतियोगीहरुमध्येका एक सुदुरपश्चिम बाजुरा कोल्टीका धमेन्द्र सुनार पनि त्यही लाईनमा छन् । २४ वर्षीय धर्मेन्द्रलाई दर्शकको पनि उत्तिकै साथ छ । यसअघि नै विभिन्न गायन रियालिटी शोमा तहल्का मच्चाईसकेका धर्मेन्द्रले लाईभमा बाजी मार्ने सम्भावना बलियो छ । ब्लाईण्ड अडिसनदेखि नै तहल्का मच्चाईरहेकी ललितपुरकी २६ वर्षीया दिक्षा थापा पनि लाईभका बलियो दाबेदार हुन् । युट्युबमा विशेष गरी अंग्रेजी भाषाका गीतहरुमा चर्चा कमाउन सफल दिक्षाले नकाउटमा प्रतिस्पर्धीलाई पछार्ने सम्भावना बलियो छ ।
सिजन ३ कै अर्का चर्चित प्रतियोगी किरण गजमेरलाई कतिपय दर्शकले सिजनकै विजेताका रुपमा चर्चा गरिरहेका छन् । साँगितिक क्षेत्रमा छुट्टै उचाई कायम गरिसकेका २३ वर्षीय किरणले नकाउट जित्नेमा दर्शकहरु ढुक्क छन् । तर किरणसँगै टिम प्रमोदका अन्य प्रतियोगीहरुलाई नकाउट यात्रा त्यति सजिलो देखिदैन । कोच प्रमोदकै टिमबाट नकाउटमा भिड्ने सिक्किमकी २९ वर्षीया सुदिता राई लाईभमा पुग्ने अर्का बलिया दाबेदार हुन् । साँगितिक परिवारबाटै सँगीत क्षेत्रा लागेकी सुदिताको साँगितिक उचाई बढ्ने क्रममा छ । त्यस्तै कोच प्रमोदको टिममा स्टिलबाट आएकी निहारिका ज्ञवाली पनि लाईभका दाबेदार हुन् । स्टिलबाट आउने प्रतियोगीहरु बलियो हुनेमा कुनै दुई मत छैन । काठमाडौँको कपन निवासी २२ वर्षीया निहारिकाले ब्याटलमा पनि दमदार प्रस्तुति दिएकी थिईन् ।
यी ६ जना प्रतियोगीहरुबाहेक पनि कोच प्रमोदमा अर्का ३ जना बलिया प्रतियोगीहरु छन् । जो लाईभका लागि बलिया दाबेदारहरुमध्येकै एक हुन् । मेलिना मैनाली, रवि गहतराज र बिक्की परियार पनि ब्याटलमा तहल्का मच्चाउँदै नकाउटमा आएका हुन् । तसर्थ उनीहरु पनि कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर लाईभमा पुग्ने तयारीमा छन् । झापाकी १९ वर्षीया मेलिनाको चर्चा यतिखेर चुलिएको छ । ब्याटलमा आएर एक्कासी तहल्का पिटेका रवि गहतराज अर्का बलिया प्रतियोगी हुन् । सिक्किमका २७ वर्षीय रविले ब्याटलमा आफुलाई अब्बल ठहराएका थिए जसका कारण उनी नकाउटमा अझ पावरफुल हुनसक्ने देखिन्छ । आफ्नो गायनबाट निर्णायकलाई समेत चकित पारेका बिक्की परियार कोच प्रमोदको टिमका अर्का दमदार गायक हुन् जो नकाउटबाट लाईभमा पुग्न योग्य छन् । भारतको डुअर्स निवासी २९ वर्षीय बिक्की नकाउटमा कडा रुपमा उत्रँदैछन् । यसरी कोच प्रमोदको टिममा सबै ९ जना प्रतियोगीहरु निक्कै बलिया छन् । तर दुःखको कुरा यी बलिया प्रतियोगीहरुमध्ये ६ जनाको यात्रा नमिठो मोडमा टुङ्गिनेछ तर उनीहरुको साँगितिक यात्रा भने जारी रहनेछ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–